4 Arrimood oo raggu sameeyaan oo burburiya guurkooda | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»4 Arrimood oo raggu sameeyaan oo burburiya guurkooda
Aayaha editor Send an email March 27, 2020
Kahor intaadan ka caban dhaqanka xaaskaaga, waxaad u baahantahay inaad isweydiisid haddii aad sameyneyso wax sii kicinaya dhaqan xumada xaaskaaga ama adiga aad sabab u tahay.
Mararka qaar ragga ayaa si ogaal la’aan ah u dhaawaca xaasaskooda taas ayaana sabab u ah in dhibaatooyin ay soo wajahaan guurka.
Akhri 4 arrimood oo raggu sameeyaan oo burburiya guurka.
Kahor marinta waxyaabo kale xaaskaaga
Xaaskaaga waxay fileysaa qofka koowaad ee noloshaada sidaa darteed markaad waxyaabo kale kahormariso iyada, si daran ayay u dhaawacaysaa arrintaas oo ah mid rag badan aysan ogeyn. Rag ahaan, waxyaabo badan ayaa la dagaalamaya waqtigaaga balse xaaskaaga wali waxay kaa filaysaa inay noqoto mudnaantaada. Waxay dooneysaa inay noqoto qofka ugu muhiimsan noloshaada.
Jir ahaan kaliya uma qiyaaneysid oo ah inaad la seexato haween kale balse sidoo kale waxaad u qiyaaneysaa dareen ahaan adigoo rajeeya inaad haween kale yeelato, ama aad la wadaagto wadasheekeysiyo xun.
Waad dhaawacday xaaskaaga markaad raadiso ama eegto haween kale isla markaana aad la wadaagto sawirro qaawan oo xun. Waa in nin kasta uu iska ilaaliyo inuu sameeyo taas ama dhaawac noocaas ah ugeysto xaaskiisa.
Inaadan qoyska xaqooda bixin
Haddii ay xaaskaaga shaqeyso iyo hadii kale, wali waxaad u baahantahay inaad bixiso adeegyada aasaasiga ah ee qoysku u baahanyahay. Waa inaad shaqeysaa oo aad ka qoslisiisaa xaaskaaga iyo caruurtaada, waa waajib ku saran.
Maadan tusin in la jecelyahay
Xaaskaaga wali waxay rabtaa inay ogaato inaad wali jeceshahay xittaa sanado iyo bilooyin kadib guurka. Ha hilmaamin inaad dhahdo waanku jeclahay waa hab muhiim ah oo aad ku tusi karto inaad wali jeceshahay.